galmada isku diyaari intaadan guursan isweydii sualahaan? - iftineducation.com
iftineducation.com – Inta aysan guursan gabadha laakiin ay dooneyso in ay guursato ayaa ah in ay ka fikirto wax yaabo badan ama is waydiiso su’aalo badan oo u muhiim ah nolasheeda dambe, hadii aadan sidaa u fikir waxaa laga yaabaa in uu go’aanka guurka kaa xumaado aad la nasiib noqoto kumanaanka kun ee maanta kala tagay.
-Maku Qadariyaaa: matahay qof isaga u qiimeesan xushmad iyo qadarin qof uu uhaayo matahay, Bulsha.com ayaa ku leh hadii aadan ku heesan wax qadarin iyo xushmad way adkaaneesaa in uu ku qiimeeyo, waxaana laga yaabaa bulshada dhexdeeda wax aadan filaneen in uu kuugu dhaho, waxaana suurta gal ah in uu qadariyo gabdho kale ay sidaa kulunta kaalintaada.
Ma Yahay Nin Qaadi kara Mas’uuliyadaada: waxaa badan rag aan qaadi karin mas’uuliyada dumarka, hadaba iska hubo in uu yahay nin qaadi kara masuuliyada, in uu yahay nin noloshaada balan qaadi kara, hadii intaas aadan ku heesan waxaad noqon doontaa dhibane.
-Ka Saxiix Ninkaaga In uu intaas kuu balan qaadayo: hadii aad ku aragto in ninkaaga uu balanta ka baxaya waxad la soo baxdaa warqad cadeeneeso in uu balan kaa qaaday taas oo noqon karta in ninka go’aankiisa dib ula laabta ama noqda mid ilaaliya balamihii uu qaaday.